အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ဖားကန့် သို့မဟုတ် ဒဏ်ရာများနဲ့ မှော်နယ်မြေ...
30 Responses to “ဖားကန့် သို့မဟုတ် ဒဏ်ရာများနဲ့ မှော်နယ်မြေ...”
ဒီပုံတွေကြည့်ရင်းနဲ့ တအားနှမြောတာပဲ...း((
It is too late already.
The main responsible person are local government, Myanmar government and local people. Because they allow to become this situation.
This is happening because of their greed. Some local people also enjoy this situation. They don't think about their future and their next generation.
ဓါတ်ပုံတွေကြည့်ပြီး ပျက်စီးနေတဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို နှမြောမိတာအရမ်းပဲ။ စနစ်တကျလုပ်ကိုင်နိုင်ပါစေလို့ပဲ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
ဒီလို တူးဖော်တာ လူတဦးတယောက်တာချမ်းတာစေတယ်။အများပြည်က ဘာမှမခံစားရဘူး။နှမျောစရာပဲ။နော်ဝေနိုင်ငံမှာဆိုရင် ထွက်တဲ့ ရေနံ သူတို့အကုန်မသုံးဘူး။နောင်တချိန်မှာ ရေနံကုန်မယ်ဆိုတာ သူတို့သိတယ်။ဒါကြောင့်ရေနံနဲ့ရတဲ့ ဝင်ငွေနဲ့ နိုင်ငံခြားမှာ မြေကွက်တွေ ဟိုတယ်တွေဝယ်တယ်။ ရေနံကုန်ရင် အမြဲဝင်ငွေရမယ့်အလုပ်မှာ မြှုပ်နှံကြတယ်။ဥပမာ ဟိုတယ်ဝယ်တယ် ၀င်ငွေမကောင်းရင် ပြန်ရောင်း ဒါဆိုရင် အနည်းဆုံး အရင်းတော့ ပြန်ရတာပေါ့။
မြန်မာအရာရှိတွေ လည်းဒီလို တွေးစေချင်တယ်။
ကျောက်စိမ်း မက ၀င်ငွေ အားလုံးမဟုတ်ရင်တောင် ဆယ်ပုံတပုံပေါ့။
ကျနော်တို့ မြန်မာတွေရဲ့ အနာကတ်က မတွေးရဲ စရာပဲ။
ကျနော်တောင်မှ ဒီလိုတွေးရင် ပညာရှိတွေပိုပြီးတွေးစေချင်။
ကျွန်တော်လည်း ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီးသံဝေဂရမိပါတယ်။ လူတွေရဲ့လိုအင်တွေမပြည့်သေးသရွေ့ တစ်ဖက်မှာနစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေဟာ ပရပွပါလားလို့ တွေးမိပါတယ်။ ဖားကန့်ဟာဘာမျှမကျန်တော့တာတောင် လှနေတုန်းပါပဲလားဗျာ။ ကျန်များကျန်ရင် တွေးစရာတောင်မလိုပါဘူး။ အေးဗျာ။ ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ပါစေလို့သာ ဆုတောင်းရတာပါပဲ။ ပုံတွေတော်တော်သဘောကျမိပါတယ်။
ပေးနိုင်တာထက် ပိုလိုချင်ကုန်တော့ တွင်းတွေပိုများကုန်တာပေါ့။
တူးချင်တဲ့သူတွေက အိမ်တွေအောက်မှာ ဘာရှိမလဲ ဆိုပြီး ဖယ်ပြီးတောင် တူးချင်နေမလားပဲ။
ရှင်သန်နိုင်ပါစေလို့ တောင်းရတဲ့ဆုတွေကလည်း အများသားရယ်။
သဘာဝ တရားအတိုင်းလှပနေတဲ့ တောင်တန်းတွေ ကျောက်တောင်တွေဟာ လူတွေရဲ့ လောဘ၊ အတ္တတွေကြောင့် ပျက်စီးကုန်ကြရသလို၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်တွေဟာလည်း ခဏခဏ ရိုက်ခတ်ခံနေရတာဟာဖြင့်... စိတ်မချမ်းသာစရာပဲနော်။
ဖားကန့် ဒေသရဲ့ ကျောက်လုပ်ကွက်၊ ရွှေလုပ်ကွက်တွေဆီကိုမရောက်ဖူးပေမယ့် အခုလို ပုံတွေနဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်တွေ့ခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ချောရေ...
ဖားကန့်ဒေသလေးလည်း...တွေးတောပူပင် ရင်ခုန်နေရတဲ့အချိန်လေးများ ကင်းဝေးနိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်
မြန်မြန်ကုန်သွားမှ အေးမယ်။ မြန်မြန် ကုန်ပါစေဗျာ။
မချောပြောသလို ပါပဲ၊ ကြည့်လေရာရာမှာ စိမ်းစိမ်းစိုစို ဆိုတာ မရှိတော့ဘဲ မြေကမူတွေ၊ ကျင်းချိုင့်တွေနဲ့ပဲ အကျည်းတန် နေပြီ၊ နာမည်ကြီးလှတဲ့ ဖားကန့်ကို ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ ဝေဝေဆာဆာ ကြည့်ရလို့တော့ ကျေးဇူး တင်ပါတယ် မချောရေ..၊ စိတ်တော့ မကောင်းပါဘူး..။
ဒဏ်ရာများနဲ့ မှော်နယ်မြေ...တဲ့လားမမ..နာမည်လေးကိုက ရင်ထိစရာ... ဗဟုသုတတွေအတွက် ကျေးဇူးပါမမ..
ဖားကန့်ကို ကြားပဲ ကြားဖူးတယ် မရောက်ဖူးဘူး။
သယံဇာတ မရှိတဲ့ ကျွန်းနိုင်ငံလေးက အရှေ့တောင်အာရှမှာ စီးပွားရေး အဖွံဖြိုးဖြိုး အတိုးတက်ဆုံးဖြစ်နေတာ လူစွမ်းအား အရင်းအမြစ်နဲ့ အစိုးရရဲ့ မိမိနိုင်ငံအပေါ် ထားတဲ့ စေတနာပါ။ လူကြီးမင်းများ တစ်မိနစ်လောက် စဉ်းစားပေးပါလို့ ပြောပါရစေ ခင်ဗျာ။
သဘာဝ အလှတွေ ပျောက်ဆုံးကုန်ပြီ။ နှမြောစရာ ဖားကန့်မြေ။ ဖားကန့်ဆိုတာ ဒီလိုပါလားဆိုတာ ခုမှ သေချာမြင်ဖူးတော့တယ်။ ကျေးဇူးချော။
တစ်စတစ်စ ကန်တာရနဲ့ တူလာပြီ။ စိတ်မကောင်းစရာဘဲ။
မရောက်ဖူးပေမဲ့ ရင်းနှီးပြီးသား နယ်မြေပါ။ စိမ်းလန်းစိုပြေနေတာလေးကိုဘဲ မြင်ချင်နေမိတယ်။
သဘာဝအလှတရားတွေ တဖြည်းဖြည်း ပျောက်ကွယ်နေပါလား မနောမြေရေ။
ဆရာတော်ပြောသလို ရင်ခုန်နေရမည့် လောကကြီး အတွက်ရင်မောမိတယ် ချောရေ။
မြင်ရတာ တကယ် စိတ်မချမ်းသာစရာ...
ကြည့်ရကြည့်ရ စိတ်မချမ်းသာဘူး ချစ်မကြီးရေ
တွေ့ရ မြင်ရတာ အကျည်းတန် စိတ်မချမ်းသာစရာပါလားနော်။
ဒါတွေကို ဘယ်လိုမျိုးပြန်လည် ဆယ်ယူနိုင်ကြမလဲ။ တွေးကြည့်ရတာ
ဖားကန့်ကို ကြားပဲ ကြားဖူးတယ် မရောက်ဖူးဘူး
ရင်မောစရာကြီးပါလား မချောရယ် ..း(
တကယ့်ကို ဒါဏ်ရာ ဒါဏ်ချက်တွေနဲ့ ပါလားချောရေ..။ အထိမ်းအသိမ်းမဲ့တဲ့ လက်တွေကြောင့် သဘာဝအလှတွေ ပျက်စီးရတာ နှမျောစရာ။ ဇာတိမြေကို ချစ်ခင်စိတ်နဲ့ ဖော်ပြပေးနေတဲ့ ချောရင်ထဲက ဒေသကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ စိတ်လေးကို မြင်မိလိုက်တယ်။
သဘာဝတရားတွေရဲ့ အလှ တဖြည်းဖြည်းချင်း ပျက်သုဉ်းကုန်ပါပြီ။
ဖားကန့်ဆိုတာကို မရောက်ဖူးဘူး။ အခုမှပဲ သေချာမြင်ရတော့တယ်။ ကျေးဇူး မချောရေ။
ချောတို့ဒေသရဲ့ သဘာဝအလှတရာတွေကို တူးဆွပြီး ရတနာတွေကိုထုတ်ယူနေကြတာကတော့ တကယ်စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာတွေအတွက်ကတော့ ဂုဏ်ယူစရာပေါ့။ အရင်ပို့စ်တွေမှာ ချောပြောသလိုပဲ သူLimit လေးနဲ့ တူးဖော်ကြရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့လေ...
မိုးကောင်းက မိတ်ဆွေက ဒီစာကိုဖတ်ပြီး မျက်ရည်ကျသွားတယ်၊ သူပြန်မရောက်တာ ၁၅ နှစ်ရှိသွားပြီကိုး။
ကုိုယ်က ဒီနယ်မြေရဲ့ အလှတွေကို မျက်မြင်ခံစားချင်ခဲ့တာ။ မြင်တောင်မမြင်လိုက်ရခင် ပျက်စီးကုန်ပါရောလားချောရယ်။ တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ချောလည်း ခံစားရမှာဘဲ။
ရွာတွေရဲ့ ရှေ့ ရေးကတော့ တော်တော်ရင်လေးစရာဘဲနော်။ စနစ်..စနစ်..
ုkhon nai saw said...